किन हुन्छ मानिसलाई डिप्रेसन ? | Filmy Bahar
किन हुन्छ मानिसलाई डिप्रेसन ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्या पछि पुनः एकपटक डिप्रेसनका विषयमा चर्चा शुरु भएको छ । आम मानिसहरु डिप्रेसनका कारण किन ज्यान गुमाउछन् भन्ने चासो पनि बढ्न थालेको छ । के मानिसमा आउने विभिन्न दबाबले उसलाई आत्महत्याको बाटोमा लैजान्छ भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।
जिन्दगीमा यस्ता केही घटना हुन्छन्, जसको असर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पर्दछ । जसकारण मानिसको मनमा नकारात्मक भावना पैदा हुन थाल्दछ । मानिस चारैतिर अन्य मानिसहरुको घेरामा परे पनि भित्री रुपमा ऊ एक्लो र निराश महशुस गरिरहेको हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभावित बनाउनेमा केही घरेलु कारण पनि हुन्छन् ।
यसबाहेक मानिसलाई सफलता र अधिक धनले पनि उसभित्र उथलपुथल सिर्जना गर्दछ । यही उथलपुथल र उदासीले मानिसलाई डिप्रेसनमा लैजान्छ । समयमै मानिसले यसको समाधान निकाले भने उसले मृत्युको बाटो रोज्न सक्छ । केही हदसम्म शरीरको हर्मोनको बदलाव पनि यसको अहम कारण हुनसक्छ ।
सामान्यतया डिप्रेसन भएका मानिसमा उदासीपन, एक्लोपन, अधिक रिस, खुशीको अभाव, नकारात्मक सोचाई, अधिक समय टाउको दुखाइ हुन्छन् । यी लक्षण कुनै पनि मानिसमा छन् भने उसले तुरुन्तै मनोचिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ मनोचिकित्सकका अनुसार डिप्रेसनको सम्बन्ध निन्द्रासँग हुन्छ । आठ घण्टाको पर्याप्त निन्द्राले डिप्रेसनलाई निदान गर्न सक्छ । हरेक बिहान घाममा केही बेर बस्ने वा बाहिर टहलिने गर्नाले पनि डिप्रेसन हट्छ ।
रमेशको गोठपानी मेलामा
सुशान्तको शोकले भाउजूको निधन